सुतेको सुत्यै मरिएला होसियार ! « News of Nepal
‘सुतेको सुत्यै भएछ, बिहान उठ्दै उठेन’, ‘सुत्दा राम्रै थियो, मध्यरातमा ऐया नभनी बितेछ’, ‘अलि–अलि रक्सी पिएर सुत्या हो, बिहान आँखै खोलेन, अस्पताल पुर्‍याउनै भ्याइएन ।’ यस्ता घटना धेरै सुन्नमा आइरहन्छन् । ठूला–ठूला नाम भएका व्यक्तिहरुको यसरी मृत्यु हुँदा अझ बढी चर्चा हुने गर्छ ।
विष पिलाएर मार्‍यो होला, धेरै रक्सी पियो होला, ड्रग्स लिने बानी थियो, धेरै तान्यो होला भनी अड्कलबाजी गर्ने चलन छ । धेरै चर्चित कलाकारहरु, राजनीतिज्ञहरु र समाजका चिरपरिचित व्यक्तिहरु राति राम्रै अवस्थामा सुतेका तर बिहान हुँदा ओछ्यानमै मृत अवस्थामा पाइएका थुप्रै घटना छन् । यसको पछाडि के रहस्य छ ? खोतल्ने प्रयास गरेको छु ।
मध्यरातको १२ बजेपछि शरीरलाई पुनः सक्रिय गराउने प्रक्रिया शुरु हुन्छ, जसका लागि एउटा रसायनको मात्रा शरीरमा बढ्न थाल्छ । यो रसायन वा हर्मोनको नाम हो कर्टिसोल । यसले सिथिल अवस्थामा रहेको शरीरको इन्जिनलाई एक धक्का दिन्छ र सञ्चालन शुरु गराउँछ । मुटुको धड्कन बढ्छ, रक्तचाप बढ्छ, ग्लुकोजको मात्रा बढ्छ, रक्तनलीहरु खुम्चिन थाल्छन्, मुटुलाई अलि जोडसँग काम गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ मुटुले यो धक्का सहन सक्दैन, फलस्वरुप हृदयगति बन्द हुन्छ । मध्यरातको १ बजेदेखि शुरु भएको यो गतिविधि बढ्दै गएर बिहानीको ७ बजेसम्म पनि रहिरहन्छ । शरीर एउटा निश्चित गतिमा आएपछि यो प्रक्रिया रोकिन्छ र अर्को प्रक्रियाको थालनी हुन्छ, जसमा शरीर बिस्तारै चलायमान हुँदै जान्छ ।
मुटुको चाल यसभित्र जडित विद्युतीय प्रणालीमा निर्भर गर्छ । मुटुको एउटा कुनामा करेन्ट उत्पादन हुन्छ, त्यहाँबाट करेन्ट मुटुको मध्यभाग हुँदै सबैतिर पुग्छ र मुटुलाई धड्काउँछ । मुटुमा करेन्ट उत्पादन हुने, सञ्चालन हुने र मुटु धड्किने प्रक्रिया पनि जैविक घडीको तालसँग मेल खान्छ । मध्यरातदेखि बिहानीको समयमा मुटुको विद्युतीय प्रणालीमा विशेष प्रकारको सक्रियता उत्पन्न हुन्छ ।
यो समयमा विद्युत्को सर्किटमा गडबडी उत्पन्न हुने र सट भएर फ्यूज जाने अत्यधिक सम्भावना रहन्छ । वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएअनुसार यो समयमा शरीरमा एकप्रकारको प्रोटिनको मात्रा घट्छ, जसले गर्दा मुटुभित्रको विद्युतीय प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । यो प्रोटिन बिहान ७ बजेपछि फेरि बढ्न थाल्छ र मुटुको विद्युतीय प्रणाली सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ ।
५. बेलुकीको खाना हलुका खाने, खाएपछि हलुका हिँड्ने, सुत्नुअगाडि गहिरो श्वास फेर्ने, नियमित औषधि सेवन गर्न नबिर्सने, सुत्ने ओछ्यान सफा र आरामदायी बनाउने, सधैँ एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने आदि कार्यले केही हदसम्म सुत्यासुत्यै मृत्यु हुने
सम्भावनालाई कम गर्छ ।